Wax Ka Guska Ragga iyo Warbixin Dhameystiran Oo hay’ada Caafimaadku ugu talo gashay.. inay dumarku…. - iftineducation.com
iftineducation.com – Wax Ka Guska Ragga iyo Warbixin Dhameystiran Oo hay’ada Caafimaadku ugu talo gashay.. inay dumarku….
Qooraha waxay qabtaan labo shaqo:
Waxay si joogta ah u sameeysaa shahwaadka qaangaarka ilaa dhimashada.
Waxay sameeysaa hormoonka raga.
Xaniin kasta waxay lee dahay tubo ugaar ah oo qaado shahwada ilaa guska.
Guska wuxuu qabtaa iney marto kaadida ama shahwada marwalba oo dareen yimaado guska wuu adkaanayaa.
Dareenkaasi guska wuxuu ka buuxinaayaa dhiig kasoo u ogalaanaayo in guska la falgalo siilka.
Shahwada waxay kasameeysan tahay dareere ama biyo ka timaado qanjir kuyaalo xaniinyaha korkiisa iyo xameetida: Biyo bixid waxay ka koobantahay tuuryo oo si talantooli ah oo guska banaankiisa kaga soo baxaayo.
Intuu kacsanyahay, guska waxaa ku harsan biyo tasoo weli shahwo ah (Hadaba is jir) hadii aadan daawo isticmaalin iska soo bixi intuu biyaha ka imaan, waa inaad salbatiibo isticmaashaa intaadan fal sameeynin.